राष्ट्रिय – Page2– ZoomNP
“एक हातले मंगलसुत्र अर्को हातले नागरिकता कदापि हुदैन” भन्ने माले अध्यक्ष सिपि मैनाली पदलोलुपतामा संशोधन बिधेयक पास गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सारथि बन्दै!
काठमाडौं, १७ वैशाख । विपक्षी गठबन्धनमा रहेको दल नेकपा मालेले संविधान संशोधन विधेयकमा समर्थन गर्ने भएको छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार मालेका अध्यक्ष सीपी मैनाली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भइरहेको वार्ता र छलफलमा मालेले संशोधनमा साथ दिने बचन दिएको हो ।
संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयकमा बहुमत संख्या पुगाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा मालेलाई उपप्रधानमन्त्री पदको समेत प्रस्ताव गरेका छन् । तर, यसमा मालेले कुनै जवाफ फर्काएको छैन् । यद्यपी संशोधन विधेयक पारित गराउन सहयोग गर्न भने माले तयार भएको स्रोतको...
Breaking_News: यीनै हुन् पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सहयोगमा प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको संशोधन बिधेयक पास गर्ने सपना चकनाचुर पार्दै संसदमा अनुपस्थित भएका सत्तारुढ दलका १० सांसद!
काठमाडौं, १७ बैशाख । आइतबार बसेको व्यवस्थापिका संसदको बैठक कार्यसुचिमै प्रवेश नगरी २१ गतेसम्मका लागी स्थगित भएको छ ।
मधेसी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्न भन्दै संविधान संशोधन गर्ने तयारीका लागी बोलाइएको थियो । सरकारले संशोधनको पक्षमा दुई तिहाई जुटाउने र प्रतिपक्षी एमाले लगायतले संशोधनलाई अल्पमतमा पार्ने तयारी तिव्र भईरहेको बेला संसद २१ गतेसम्मका लागी स्थगित गरिएको हो ।
तर सरकारमा सहभागी राप्रपाका १० संसद आज विहानैदेखि सम्पर्कमा रहेका छैनन् । संविधान संशोधनमा भोट हालिँदैन भन्दै असन्तुष्टी...
आज यसकारण हुन् सकेन एमालेको घोषणापत्र सार्बजनिक, सोमबार बिहान ९ बजे मात्र सार्वजनिक गरिने(बिज्ञप्ति सहित)
काठमाडौं । नेकपा एमालेले स्थानीय निकायका लागि तयार पारेको चुनावी घोषणापत्र सोमबार बिहान ९ बजे सार्वजानिक गर्ने भएको छ ।
आइतबार दिउसो ३ बजे सार्वजानिक गर्ने भनिएको घोषणापत्रको पूर्णरुपमा सम्पादन भइनसकेकाले आइतबार सार्वजानिक गर्न नसकेको एमालेले जनाएको छ ।
‘आज ३ बजे घोषणापत्र सार्वजानिक गर्ने कार्यक्रम थियो तर पूर्णरुपमा सम्पादन भइनसकेकाले भोलि बिहान ९ बजेलाई सारेका छौं,’ सचिव भट्टराईले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाईएको छ ।
संसोधन बिधेयक फेल हुने देखेपछी सत्ता छोड्न प्रचन्डलाई देउवाको दवाब, ओली निवासमै सरकार परिवर्तन बारे छलफल भएको खुलासा!
सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक र स्थानीय तह निर्वाचनको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्रै मतभेद सुरु भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी र संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी मोर्चालाई मनाउने कसरतमा रहेको सरकारका दुई घटक कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच शनिबारबाट अचानक स्थानीय तह निर्वाचनपछि सत्ता हस्तान्तरणको विषयले प्राथमिकता पाउँदा ती दलबीच मतभेद बढेको हो । संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गर्न विभिन्न विकल्पमा छलफलमा जुटेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाबीच शनिबार साँझ विधेयक पारित गराई दुई चरणको...
आगामी १० बर्ष भित्र राष्ट्रिय ध्वाजवाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेवानी) संग १५० साना-ठुला जहाज!
काठमाडौं : राष्ट्रिय ध्वाजवाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेवानी)मा आगामी १० वर्ष भित्र एक सय ५० साना ठूला जहाजा पुर्‍याउने एमालेले घोषणा गरेको छ। एमालेले स्थानी निर्वाचन लागि तयार पारेको घोषणापत्रमा नेवानीमा एक सय ५० जहाज पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ।
घोषणपत्रमा आगामी १० वर्ष भित्र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि ठूला वाइडवडी विमान ५० वटा, साना न्यारोबडी विमान ५० वटा र आन्तरिक उडानका लागि साना ठूला गरी ५० वटा विमान पुर्‍याउने महत्वकांक्षी सपना उल्लेख गरेको छ।
पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा एमालेका युवा नेता रबिन्द्र अधिकारी! रबिन्द्र बिरुद्द गठबन्धन बनाउदै कांग्रेस, माओबादी केन्द्र र राप्रपा
पोखरा, देशकै सबैभन्दा ठूलो पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एमालेका तर्फबाट युवा नेता तथा सांसद रबिन्द्र अधिकारी उम्मेदवार बन्ने भएका छन् । सांसदको विकास समितिका सभापति समेत रहेका सांसद अधिकारी उठ्ने निश्चित भएको पार्टी स्रोतले जनाएको छ ।
नेता अधिकारी मेयरमा उठ्ने सम्भावना बलियो भएपछि पोखरामा अन्य पार्टीहरु गठबन्धन निर्माणमा सक्रिय भएका छन् । यसमा विशेषगरि काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपालगायतले चुनावी गठनबन्धन बनाउने तयारी गरेका छन् ।
अन्तत: पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र बने आजका हिरो: संशोधन बिधेयक फेल गराउन सरकारलाई कडा झट्का दिदै ज्ञानेन्द्रले चाले यस्तो कदम!
काठमाडौं, १७ बैशाख । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलगायत विपक्षीका विरोधका बाबजुत जुनसुकै हालतमा आज संविधान संसोधन पारित गर्ने तयारीमा रहेको सरकारलाई गम्भीर झड्का लागेको छ । एमालेलगायतका दलले देशका लागि नै खतरानाक भनिरहेको संसोधन प्रस्ताव सरकारले आज जसरी पनि संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने तयारी गरेको थियो । त्यसका लागि सरकार जुनसुकै हदसम्म जाने अन्तिम तयारी पनि प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको विरोधका बाबजुद संशोधनको पक्षमा लगभग बहुमत पुगिसकेको थियो । तर, अन्तिम समयमा सत्तारुढ...
सरकार अराजक र अनैतिक ढंगबाट बिपक्षी दल फुटाउने खेलमा लागेपछि आक्रामक बन्यो एमाले, सरकारले माफी नमागे संसद चलन नदिने गर्यो निर्णय
१७ बैशाख – नेकपा एमालेले संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नका लागि सरकार अराजक र अनैतिक ढंगबाट प्रस्तुत भएको आरोप लगाएको छ ।
आइतबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले दुई तिहाई पुर्याउन सरकार विपक्षी दलहरु फुटाउने षडयन्त्रमा लागेको आरोप लगाएको हो ।
सरकारले माफी नमागेसम्म संसदको प्रक्रिया अघि बढ्न नदिने एमाले संसदीय दलको बैठकले निर्णय पनि गरेको छ ।
संविधान संशोधनले कमल थापालाइ लाग्यो कडा झट्का, संशोधन बिधेयकको पक्षमा उभिन ह्विप जारी गरेपछी १५ सांसद बेपत्ता, एमालेलाइ साथ दिदै बिपक्षमा जान गोप्य बैठक !
काठमाडौं, १७ बैशाख । आइतबार बिहानै संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा आफ्ना सांसदहरुलाई मतदान गर्न निर्देशन दिएको राप्रपामा संसोधनले पहिरो ल्याएको छ । संसोधन विधेयकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा गम्भीर विवाद विवाद देखिएको छ ।
स्रोतका अनुसार आइतबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा संसदीय दल र पदाधिकारी बैठक चलिरहेका बेला १५ सांसद भने राजधानीको एक रिसोर्टमा छुट्टै छलफलमा जुटेका छन् । दुई समान्तर वैठकले राप्रपाभित्रको अन्तरविरोध सतहमा आएको छ ।
पार्टीका केही प्रभावशाली सांसद् र केन्द्रीय सदस्यहरु पार्टी संस्थापनको लाइन भन्दा बाहिर गएर छुट्टै छलफलमा...